जात र भातमा भिन्नता हुन्छ : NepalChurch.com
जात र भातमा भिन्नता हुन्छ। जात हाम्रो आफ्नो पहिचान, भात हामीले खाने भात। हाम्रो जात परमेश्वरको सन्तान, जुन नाता क्रूसमा गासिन्छ। सम्प्रादाय हाम्रो भात, जुन मानिसले बनाइन्छ। मेरो भाइका छोराछोरीहरू गाउँमा गुन्द्रुक ढीडो खाएर हुर्के र मेरो छोराछोरीहरू अमेरिकामा पिजा, वर्गर खाएर हुर्के। मेरो छोराछोरीले “ए काकाका छोराछोरीहरू हामीलाई मन पर्दैन, हाम्रो नाता पनि लाग्दैन किनकि तिनीहरूले गुन्द्रुक ढीँडो खाँदो रहेछ” भन्नुमा र इसाइहरूले क्रूसमा गासिएको नाताभन्दा आफ्नो साम्प्रदाय र तरिकालाई बढी मान्यता दिएर बेमेलमा जिउनुमा खासै भिन्नता रहन्न। हामी इसाइहरू भातमा अल्झेर बस्नु हुँदैन, यसो गर्नु हामीलाई उद्वार गर्नुहुने येशूको क्रसको खिल्लि उडाउनु हो। उहाँ क्रूसमा जीवन दिन, आसा दिन, मिलाप गराउन जानुभयो। हाम्रो परमेश्वर मिलाप गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाई मिलापको सेवामा हुनुहुन्छ कि सानो सानो झुन्डमा पोको परेर छुट्ने सेवामा हुनुहुन्छ? बाइबलले भन्छ, “मेलमिलाप गराउनेहरू कति धन्‍य हुन्! किनभने तिनीहरू परमेश्‍वरका सन्‍तान कहलिनेछन्।” मत्ती ५:९ सरलनेपाली।
प्रियहरू मित्रहरू, हाम्रो आफ्नो इच्छा पूरा गरेर कुवामा बस्नुभन्दा, आफ्नो इच्छा त्यागेर परमेश्वरको इच्छा खोजेर बगैजामा जिउँनु अति रमनिय हुन्छ। काठमाडौका कति नजिक नजिकका सँगतिहरू एकठाउँमा जुटेर सेवा गर्नु पर्ने देखिन्छ। प्रिय पास्टर अगुवाहरू, आज हामीले आफ्नो हृदय जाचौँ, कतै तपाई र म स्वर्थ र घमन्डको सिकार त भएका छैनौ? बाइबलले भन्छ, “आफ्‍नै मात्र भलाइ खोजेर तिमीहरू केही नगर। तिमीहरूले फोस्रो घमण्‍डको निम्‍ति पनि केही नगर। एक-अर्काप्रति नम्र बन र अरूहरू आफूभन्दा राम्रा छन् भनी सम्‍झ। 4आफ्‍नै मात्र होइन, अरूको पनि विचार गर।” फिलिप्पी २:३,४ सरल नेपाली।
परमेश्वरको नजर ५००० विस्वासी भएको चर्च, ५ जना विस्वासी भएको चर्च दुवै महान हुन्। येशू मन्डली खडा गर्न क्रूसमा वली हुनुभयो। उहाँले हामीलाई उहाँको मन्डलीमा सेवा गर्ने महान अवसर दिनुभयो। एकदिन हामी सबैले नै संसारको सृष्टिकर्ताको सामु उभिनुपर्छ। बाइबलले भन्छ, “तिमीहरूका अगुवाहरूको कुरा मान। उनीहरूले सधैँ तिमीहरूका आत्‍माको देखरेख गर्छन् कारण तिनीहरूले आफ्‍नो कामको लेखा परमेश्‍वरलाई दिनुपर्नेछ। तिनीहरूका कुरा मान्‍यौ भने तिनीहरूले आफ्‍नो काम खुसीसँग गर्नेछन्, होइन भने दु:खी भएर काम गर्नेछन्। तिनीहरूलाई दु:खी बनायौ भने तिमीहरूलाई केही फाइदा हुँदैन।” हिब्रू १३:१७। प्रिय विस्वासी तथा अगुवाहरू, आज हामी यही कुरालाई मनन गर्दै संसारलाई बनाउनुहुनेको आराधनामा जुटौँ। तपाईलाई परमेश्वरले आफ्नो अभिप्राय चलाउनुभएको होस्। हामीलाई गलत कदमहरूबाट जोगाउनुभएको होस्। तपाईको दिन सुभ रहोस्।
Category: special, Special
« पास्टर युवकको स्वास्थ्य स्थिति र हाम्रो कर्तव्य
ईसाइहरुले नेतृत्व गरेको ४ दल स्थानिय चुनावमा सहकार्य गर्दै, साझा रुपमा जनजागरण पार्टी नेपालको चुनाव चिन्ह (टर्च लाइट) प्रयोग गर्ने »